ကိုဘလက်ချော နောက်ကလိုက်ခြင်း (အတူတူစားခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်းကင်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ကိုဘလက်ချော နောက်ကလိုက်ခြင်း (အတူတူစားခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်းကင်)
ကိုဘလက်ချော နောက်ကလိုက်ခြင်း (အတူတူစားခဲ့ဘူးတဲ့ဖုန်းကင်)
Posted by ကိုေပါက္(မႏၱေလး) on Jun 13, 2012 in Photography | 31 comments
ဒါနဲအူးလေးပေါက် ဖုန်းကင်ဆိုတော့ ဖင်ကုန်းပေါ့နော်
ကိုဖတ်ကို ရုတ်တရုတ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်နဲ့တူတယ်
ဟဲ့ နာရန်ကုန်လာပြီး အကုန်ဆုံးမရမှာလား
အခု ရွာဇရပ်ထဲကနေ ညည်းတို့ကို နာစောင့်နေတာ ၁ နှစ်နဲ့ ၆ လ ရှိပါပြီကွယ်
ဟယ် ရွှေတိုက်စိုး ကြီးက ထွားလိုက်တာကြီးဟယ်…။
ရွှေတိုက်စိုးက ဖက်တီးကက် ခေါင်းကြီးကို ကိုင်လို့…။
ဖက်တီးကက်က ရွှေတိုက်စိုး တင်ပါးလေးကို ပွေ့လို့ ဖက်လို့…။
ဂန္တဝင်ပုံ တစ်ပုံပါပဲ ဗျာ…။
အပြင်မှာလည်း အင်မတန်ခင်ပေမဲ့ ..မတူတာတွေကို..
သူ့အမြင် ကိုယ့်အမြင် ငြင်းကြရင်တော့..
အော် ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာကို ဝိုင်းပုံဖော်တဲ့အထဲ ..
သူတို့က အရမ်းချစ်ပီး စိတ်ကောက်နေတာဆိုတော့ အင်း….မဟုတ်မှ လွဲရော သမီးကြည့်ဖူးတဲ့ ” Broke Back Mountain ” ဇာတ်ကားထဲကလို လိင်တူချစ်သူတွေလားဟင် တစ်ခါတလေမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေ အရမ်းနီးစပ် တတ်တယ်ဆိုတာ သမီးလက်ခံပါတယ် နောက်သူတို့က ဖုန်းကင်စားကြတယ်ဆိုတော့ မပြေလည်ကျလို့များလား ဟင်……သနားပါတယ်
အမြန်ဆုံး ပြန်ကုန်း အဲလေ ပြန်လည်ပြီး “တူနှစ်ကိုယ်ခရီး အလိုတူပီး သွားနိူင်ကြပါစေ”
ဟို စာရိုက်ရင်းတန်းလန်း သမီး ဘောပင်လေး ကျသွားလို့ ကုန်းကောက်လိုက်တာ နည်းနည်း အသံကျယ် သွားတယ်
စိတ်မရှိပါနဲ့နော် ဘယ်သူမှ မသိတုန်း ကိုယ့်ဖာသာကို အကုန်ပြန်ရှူလိုက်ပါပီ
ကိုယ့်ဟာကို မို့လို့လားမသိဘူး မွှေးသလိုဘဲ
အော်ဒါနဲ့ ဒီပုံတင်တဲ့ လေးလေးက လက်ဆော့လို့ ဘာလို့ရေးတာလဲဟင်? သမီးက လက်ဆော့တဲ့သူဆို အရမ်းမုန်းတယ်
အထူးသဖြင့် သမီးချစ်သူ ရဲတိုက်နဲ့ နေတိုး သူတို့နှစ်ယောက် လက်ဆော့လို့ အဟင့်….အဟင့် သမီးဆိုဒ်တွေ ပြောင်းကုန်ပီ
ဟဲ့ မိန်းမလိုလို် ဂျော်လကီးလိုလို
ဘာလဲဟ ကြည့်ရတာတော့ ရွာသူားအသစ်မဟုတ်လောက်ဘူး
သမီးက မိ်န်းမအစစ်ပါ ကိုဝါးတားမဲလုံးရယ်
ရွာသူလည်း အသစ်ပါ ခုတင် ရွာသူ မိတ်ဆက်စာ ရေးနေပါတယ်၊ ခုတော့ ပြောထားပေါ့ ပီးမှ လန်းတယ်ဆိုပီး………
အဟင်း.. ဟင်း… ဒီတမီးဆိုတာလေးတော့…
စစ်ရင်တော့ စစ်ပေါ့… မစစ်တစစ်နဲ့ တတစ်တစ်လာလုပ်ရင်
နှူးးဘားဂိုဏ်းချုပ်တို့ ကကြောင်ကြီးတို့နဲ့ ပေးတွေ့ဘလိုက်မယ်… ညှင်းညှင်း..
ပီးမှ လန်းလို့ကတော့ လန်း.. မလန်းလို့ နွမ်းနေလို့ကဒေါ့…
ကြက်ဖင်နဲ့ ချစ်စဆရာတို့နဲ့ ပေးတွေ့ပလိုက်မယ်… ငှဲငှဲ…
အမလေးဟဲ့ လိင်တူချစ်သူတောင် လုပ်လိုက်သေး… ဒီရုပ်ဒီရေနဲ. အေ
သမီးဆိုဒ်ပြောင်းတာ မဟုတ်တာတွေလုပ်လို.နေမှာပေါ့…….. ရဲတိုက်နဲ.နေတိုးက သမီးလေးကို ဘလက်ကော်ဖီ ဝိုင်းတိုက်ကြတယ်လား……..ငါ့သမီးလေး အခုတော့ ပုံပျက်နေပီပေါ့……. နဲတောင်နဲသေး
ကိုရွှေတိုက်ကြီးက အပ်ပီတန်ဝိတ်ဂိမ်းတွေ သောက်တာလား..တင်းဂရိုးတွေ မှီဝဲတာလား..
ကိုကြောင်ဝတုတ်ကြီးကပဲ ကြာလေ တိုလေ.ဖြစ်သွားတာလား.
ဟဲ့တောင်မရေ. ဒီရွာထဲမှာ အရပ်ပုသူကို ရှည်အောင် ရှည်သူကိုပုအောင် ဒက်ပုံ ရိုက်တတ်တဲ့ ဆြာဒွေ ချိတယ်ဆို တာ ညည်းမသိဘူးလား……….. တဂယ့် ပညာ ရှင်ဒွေနော်… ဟွင်းဟွင်းဟွင်း
ကိုတိုက်က အရပ်ရှည်လာတာ တင်းဂရိုးမှီဝဲလို့မဟုတ်ဘူးဗျ… နီဂရိုးတွေမှီဝဲလို့…အာဟိ
ကြောင်ဝတုတ်က သူသာနည်းနည်းပိန်ရင် လေးဖြူနဲ့တူမှာတဲ့
မိတိုက်ကတော့ သူသာ ကတုံးတုံးလိုက်လို့ကတော့……ဇာဂနာနဲ့တူမှာတဲ့။
ဟာလေးပေါက်ကလဲ တားက မင်းမော်ရဲရွှေတိုက်တိုး ပါဂျ ဟီးဟီး
စုံထောက်အောင်တိုက်က ဓာတ်ပုံထဲကျတော့ အရပ်ရှည်သွားတယ်နော်..
ကိုဖက်ကြီးက အတော် ပူ. အဲလေ အတော်ဝသဗျ။ကိုပေါက်ရေ ဖုန်းကင်ဆိုလို ့။
အတူ အခင်အမင်မပျက် အလုပ်ဆက်လုပ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်….
အော်တိုက်တိုက်ရယ်။ နေ့ချင်းညချင်းဘယ်လို ရပ်လိုက်လို့ အဲလိုဂျီးရှည်သွားတာတုံး။ ဖက်ကက်က မြေမျိုသွားအဲလေ မွှားလို့ ဒူးကွေးထားတာလားလို့။ နောက်တာနော်။
သူရို ့နှစ်ယောက်ဆိုတာ ခင်မင်ကြသူတွေ ။ အပြင်မှာ ရန်ဖြစ်လို ့မကောင်းဘူးလေ ။ ဂေဇက်တက်ပြီး ခဏလောက် ဖြစ်ကြည့်ရတယ် ။ ပြီးတော့မှ ရှေးကထက် ၂ဆတိုးလို ့ခင်ကြတာပေါ့ဗျာ ။
ဟုတ်ကြတယ်မလား ၊ ကိုရွှေ နဲ ့ကိုကြောင်ဖက်ရေ
ဟုတ်ပတော် ဟုတ်ပ ကပေ့ အထင်မှန်ပ တော်
သားဖနှစ်ယောက်ပုံတွေရှိတယ်… သူတို့သံယောဇဉ်က ကြီးလွန်းတဲ့အကြောင်း ပြပါဦးမယ် … ဟိဟိ
ထင်တော့ ထင်သားပဲ ဆာရေးဆြာဒွေရဲ့ မဟာဗျူဟာတွေများ တယ်ကောင်းသကိုး နောင်လာ နောက်သားတွေ မှတ်သားစရာ လူငယ်ပေမဲ့ ပညာမငယ်ဘူးဆိုတာကို ပြကြလေတယ်ပေါ့…….
ကျုပ်တို့ ဘကြီးအစား ချဉ်ပါတယ်အေ….
ဟို Pitbull ဆိုတာလေးက ဘာလေးတုန်း……
ဟေး……ဟေး အဲဒါလေးတော့ ကြိုက်သကွယ်
လူမဟုတ်ပါဘူး စာသားလေးပါ တော်ကြာ နှူးဘာဂိုဏ်းသားတွေနဲ့ ချနေရအုံးမယ်
ငြင်းစရာတွေလည်းငြင်းကြပေါ. …။(ဒါမှ ..သဂျီးသဘောကျမှာ )
ကိုကြီးပေါက်ကတော. တကယ်တော်ပါပေတယ် ….အချိန်မှီ ငြီမ်းချမ်းရေးသံတမန် လုပ်ပေးထားလို. ။
တကယ်တော. ….ကျွန်တော်လည်း သူတို.စာတွေဖတ် ၊ ကွန်မန်.တွေဖတ်ပြီး မမြင်ဘူးပေမဲ.
ကျွန်တော်တို.က အတွေးအမြင်မတူတဲ့ သိပ်ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ခင်ဗျ
အခုလိုကြားရတာ အဲ ဖတ်ရတာ မင်္ဂလာရှိကြောင်းပါ စုံထောက်ကြီးရှင့်
အောင်မာ ငါတိုက်တဲ့ ဘီယာလေးသောက်ပြီး အခုမှချစ်ပြနေလိုက်ကြတာ။
စာကို စာချင်းပေါင်းတယ်။ လူကို လူချင်းပေါင်းတယ်။ သံလက်သီး ပေါ်မှာ ကတ္တီပါ အိတ်စွပ် မထားဘူး။ comment ပေါ်မှာ ဘယ်လို ငြင်းငြင်း .. အပြင်မှာ အလွန်ရင်း ….. ( အသစ်ကို အသစ်လို့ မထင်ပဲ .. တပတ်နွမ်း လို့ ထင်ပါကြောင်း) …..။
သိန်း20 သုုံးဆယ်ကနေ ငါးသိန်း။
နောင်ဆို ငါးထောင်ဖြစ်မယ့်အတူတူ ကင်စား ပလိုက်တာဗျာ